राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, जसपाबाट को–को सरकारमा जाने ? Canada Nepal
राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, जसपाबाट को–को सरकारमा जाने ?
काठमाडौं । सत्तासमीकरण बनाउन सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका एक सय २० नेता कार्यमाथि सरकारवादी मुद्दाहरु फिर्ता लिएको छ । योसँगै जसपा सरकारमा जान धेरै दिन बाँकी नरहेको बताउन थालिएको छ ।
ओली सरकारमा जाने कि ओली सरकारको विकल्प खोज्ने भन्ने दुुवै समूहमा जपसाका नेताहरु विभाजित भइरहेका बेला सरकारले एक सय २० जना जसपाको नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिएको छ । जसले जसपालाई सरकारमा सहभागी हुन वातावरण बनाएको छ ।
जसपाबाट को–को सरकारमा सहभागी हुने ?
सरकारले एक सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएर जसपाको माग पूरा गर्ने बाटोमा हिँडेपछि सत्तासमीकरणबारे चर्चा हुन थालेको छ । उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई समूहलाई मनाउन सके महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो समूह सरकारमा जाने तयारीमा छन् । राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरु देखिनै महन्थ ठाकुर पक्षधर सरकारमा जाने पक्षमा रहँदै आएका छन् । ओली सरकारमा सहभागी भए जसपालाई करिब १० वटा मन्त्रालय दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका स्रोतको भनाइ छ ।
जसपाबाट सरकारमा सहभागी हुनेमा राजेन्द्र महतोसहित राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय, शरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, चन्दा चौधरीसहितका नेताहरुको नाम चर्चामा रहेको छ । यद्यपि, यसको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।
बैशाख १६, २०७८ बिहिवार १४:५७:१० बजे : प्रकाशित